Uhlaselo lobugwenxa beLondon, iManchester, iParis, iBarcelona kunye neRotterdam kwi-23 kunye ne-24 ngo-Okthobha? (UPDATE)): UMartin Vrijland
Uhlaselo lobugwenxa beLondon, iManchester, iParis, iBarcelona kunye neRotterdam kwi-23 kunye ne-24 ngo-Okthobha? (UPHAKATHI))
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Oktobha 2019	• 37 Comments
Namhlanje ndinikwe ividiyo ethi u-Ole Dammegard uxela iflegi yobuxoki (isiNgesi: iflegi yobuxoki) uhlaselo lwabanqolobi eLondon, eManchester, eParis, eBarcelona naseRotterdam ye23 kunye ne-24 ka-Okthobha (HLOLA ngezantsi kwinqaku). Ndimchaze u-Ole Dammegard, enye indoda yaseDenmark eyindlela ephambili yemithombo yeendaba, njengendawo yokulwa iqela eliphikisayo kumanqaku angaphambili. Oku kuthetha ukuba unokutyhila inyani ukuze afumane iikhredithi kwaye asebenze njengomnatha wokhuseleko kumandla olawulo. I-pawns elawulwayo ngamanye amaxesha inokuveza izinto. Ewe ndiyakwazi ukuba ndingalunganga, kodwa ukrokrelo wam kukuba i-Dammegard yinto enjalo elawulwayo.
Waye wazithethelela kwixa elidlulileyo owayengumphathi wejelo losasazo eendaba uZen Gardner. Kwavela ukuba le Zen Gardner (emva kokufumana iminyaka emininzi yokuvelela kwezinye iindlela zosasazo) inokunxulumana nehlelo laBantwana bakaThixo. In eli nqaku en eli nqaku Ndicacisile ukuba enye indlela yamadoda eendaba engaphambili isoloko ifumana inkxaso, kwaye emva koko iswila inqanawa. Lowo uphuma kwelinye ilungu lehlelo azukisa i-pedophilia aze omnye azibulale ehleli kunomathotholo (ukuba angaphili kwakhona emva kwexesha). Fundisisa la manqaku ukufumanisa ukuba umdlalo wenkcaso olawulwayo udlalwa njani.
IDammegard isekela ulwazi lwayo kuhlaselo lobunqolobi oluzayo (ngokwamagama alo) kumkhondo wolwazi oluthile luhamba iminyaka. Andinakunceda kodwa ndifumane umbono wokuba unikwa ulwazi. Ngokubhekisele kum, oku kuthetha ukuba sele sinayo apha ukhuseleko kumnatha wangaphambili ekuqalisweni, ukuba emva kwalo naluphi na uhlaselo abantu abafuna inyaniso bangabamba zonke ngaxeshanye. Emva kwayo yonke loo nto, ligorha elivele lazichaza kwangaphambili zonke.
Ngokumalunga nokuchaphazelekayo kwam, akufuneki ke ukuba simangaliswe ukuba olo hlaselo (lweflegi yobuxoki) luya kuza ngokwenene. Emva koko siya kufumana i-'umphakathi yinyaniso 'entsha kwi-intanethi kwaye loo ndawo yoluntu lwenyaniso luya kuba sesipokothweni seenkonzo, kuba baye basungula umntu wabo othembekileyo (u-Ole Dammegard) kwangethuba. Le yindlela umdlalo weqela eliphikisayo elidlalwe ngayo kumashumi eminyaka, kwaye ke kuyakuba njalo ngeli xesha.
U-Ole uza kuseka ulwazi lakhe kwidatha evela kwinkampani ebizwa ngokuba yiCallen Solutions (emergency-solutions.com). Isisu sam esisezantsi sithi sifumana ulwazi lakhe kwiinkonzo ezifanayo ezilawula ukusebenza kweflegi yobuxoki.
UDammegard uxela ingomso nangomhla olandelayo ngomso ukuhlaselwa kwe39 kwizixeko ezihlanu ezichaziweyo. Ukusebenza kweflegi yobuxoki (eyabhengezwa njengesixhobo sokugrogrisa) kwakuza kuthiywa igama. Iya kuchaphazela ukusebenza "kweLwandle ukhozi".
Ukongeza, kuya kubakho ukuzilolonga okunxulumene nentlekele kumzi wamandla eNyakatho yeSweden, apho iDammegard ikrokrelayo ukuba iya kuba luhlaselo lwabanqolobi bexoki. Zibonele ngokwakho ukuba iDammegard iyiveza njani kakuhle kudliwanondlebe olungezantsi njengomxholo wemithombo yeendaba. Andimthembi lo mfo, kodwa ndachaza ukuba phantsi konxibelelwano lwewebhu ezimbini zikhankanyiweyo kunye noko kuchazwe apha ngasentla.
Ukuba ngenene ayisiyomisebenzi yokugrogrisa kuphela, kodwa uhlaselo lwangempela (olungeyonyani) luya kulandela, unokufumana isiphumo esichaseneyo, sokuba iinkonzo zizokuthi iindlela ezifana ne-Ole Dammegard kunye nolunye uhlobo losasazo zinetyala ukuba imibutho yabanqolobi iyayazi imithambo kwaye ke basebenzise loo meko yokuziqhelanisa nokwenza uhlaselo lokwenyani ngezo ntsuku. Ngamafutshane: zichanile ngqo ((kulawulwa) ezinye iindlela zosasazo ezigxekwa kwi-Blackjack kwaye eso sisizathu esihle sokususa ngokusisigxina yonke into engabalulekanga kwimithombo yeendaba kwi-intanethi. Imithombo yeendaba engenye ke, emva kwayo yonke loo nto, abo kuye kwafuneka bakhuphe zonke iintlobo zokuzilolonga ezicwangciswe ngendlela 'eyimfihlo kangangoko kunokwenzeka'. Emva koko kunokuthiwa enye imithombo yeendaba yanceda "amaqela abashokobezi" ngolwazi ukuze kunene Bakwazi ukwenza uhlaselo ngelixa wonke umntu ecinga ukuba ngumthambo.
Amapolisa kunye nomkhosi banakho (kwimeko yokuhlaselwa okungeyonyani, ekucingelwa ukuba iyinyani; iflegi ebubuxoki) ke bathi abafuna inyani ngeekhamera zabo nokwabelana ngolwazi (jonga umnxeba kaDammegard ukufota yonke into), amaqela obugrogrisi ancede nangaphezulu, athintela umsebenzi wawo.
Ngaba ayengeyiyo into eyoyikisayo enkulu enjalo imeko ye911? Nangona kunjalo bekukho imithambo enkulu eyenzekayo evela kwisehlo sokhuseleko lwasemoyeni i-NORAD; abaququzelela inqwelomoya kwindawo yokuhlaselwa ngabanqolobi. Kuyinto ephantsi ngokucacileyo ukuba enye imithombo yeendaba inokuchongwa ngokudibeneyo kwimicimbi yengozi yovalo ngomso nasemva komso. Ke enye imithombo yeendaba engenye yezokutyhilwa kwangoko malunga nezothuso lokwenyani lenziwe ngokusebenzisana.
Iya kuba yeyiphi imeko; (1) U-Ole Dammegard uba yinkokeli entsha kwintshukumo yeNyaniso njengendawo yokhuseleko yomnatha of (2) unoxanduva lokuphunyezwa kwesenzo sobugrogrisi ngeentsuku ebefanele azise ngazo, ukuba ziyimfuneko, zizizathu zekofu. Ngayiphi na imeko, kuya kuhlala kubonwe ukuba ngaba ukuzivocavoca okanye naluphi na uhlaselo (lobuxoki) luya kwenzeka. Iya kuthi, nangona kunjalo, ihambelane nokulindelwa kwezahlulo zeflegi ezingezizo esele zikhankanyiwe apha kule ndawo. IYurophu ingasebenzisa i-kickstart kwiziyolo ezinkulu ezicwangcisiweyo. Ngokuqinisekileyo ngalo mzuzu iBrexit ngoku ekugqibeleni kubonakala ngathi iphela esiphelweni. Akukho nto bayifunayo ngaphandle kwesiphithiphithi; ye 'Ordo ab Chao'.
UDammegard ke ngoko unokubeka isiseko sokuvalwa okuqinisekileyo kwiwebhusayithi engenye kunye nokufaka umboniso bhanyabhanya ngamapolisa, umkhosi kunye 'nabasebenzi boncedo'.
Okwangoku alukho uphawu lokuhlaselwa okanye uloyiko lokuziqhelanisa. Indima kaDammegard ke yayincinci kancinane kunoko bendiyichazile, kwaye babhenela kwiindlela zakudala ezifanayo. Akazange abe ligorha elikhulu, engazange yena kunye nabaxhasi bakhe baba ngamaqabane okuncedisa abagrogrisi ngokufaka ifilimu nomkhosi. Hayi, waba yindoda enokuthi iphinde ijongele phantsi ukuthembeka kweminye imithombo yeendaba. Ndiphinda nditsho kuba le yenzekile ngaphambili ngokuthunyelwa komhlobo wakhe omkhulu 'uZen Gardner' njengelungu kunye nenkokeli yaBantwana bakaThixo iminyaka; ihlelo elikhuthaza ukulala ngesondo nabantwana. I-Ole Dammegard sele ingqiniwe ukuba iyimali kwaye ngoku iyangqina kwakhona. Esi sesinye sezicwangciso eziliqili zokhuseleko lweenkonzo. Bazisa i-pawns zabo, ezikhuthaza ngokubanzi kuyo yonke indawo ngezinye iiwebhusayithi ezichaseneyo (ezizilawulayo ngokwazo). Ke emva koko bavuthuza izinto ngesikhalo esikhulu. Ndiyichaze le nkqubo kumanqaku amaninzi adlulileyo. Ndihlala ndilicala lam.
Yazi wena, bantu abafana no-Ole Dammegard bayaqhubeka nokusasaza iinyani zeenyaniso njengethiyori zenqanawa. Kuya kufuneka bahlazise ukucinga okucokisekileyo ngokuqala ngokudibanisa abalandeli abaninzi emva koko babeke izinto lihlazo. I-Zen Gardner nayo igcinwa iphantsi kolawulo. Abantu abanjengoWillem Felderhof (iNgqungquthela yeNgqondo evuliweyo) kunye no-Ole Dammegard bayonwabile ngokuthatha inxaxheba, kodwa kunye neziza ezinjenge-Ella Ster. Ukuhlala kude kwezi shillic ingcebiso yam.
Umhla wokupapashwa kwenqaku lasekuqaleni: I-22 Oktobha 2019 16: 47
Ngaba iphulo le-Red Cross 'lokufaka umngcipheko kwiifilimu "
Ukwesatshiswa kweentengiso zeKrisimesi yaseStrasbourg kunye nesigebengu sokuphekula kubonakala kulungele ixesha elihle (wamukele i-Eurogendfor)
'Umothuso ngumgcini' wentra ye-AIVD
tags: 5, Barcelona, ngxaki, amanga, eziziimbalasane, iflegi, indawo yamandla enyukliya, london, Manchester, I-NORAD, ukusetyenziswa, Ole Dammegard, sebenza, EParis, Rotterdam, Ukhozi lwaselwandle, izisombululo, izixeko, loyiko, ukuhlaselwa kwamaphekula, iflegi yo buxoki, ezintlanu, ESweden
22 Oktobha 2019 kwi-17: 25
"Ndingenza ntoni?". Ke, ungalandeli isiluleko seDammegard kwaye ngakumbi uphephe ii-hotspots kwaye uthenge ukutya okusemathinini kunye nokusela amanzi kwiiveki ezimbalwa.
Ke sukucinga ukuba ungafezekisa impumelelo enkulu ngokufota. Lowo ngumgibe wokuqonda isalelo kuloo. Ke icebiso lam: musa ukumamela le mbumbulu yamandla u-Ole Dammegard.
22 Oktobha 2019 kwi-18: 16
Abantu abafuna inyani kungekudala baya kuba (ngenxa yenkonzo yeemfihlo - i-Ole Dammegard). Banceda la maqela abashokobezi ukuba afumane ulwazi ngokukhupha imihla neendawo zokuzilolonga kwaye bathumela abantu endleleni ukuba bayokufota amapolisa kunye nomkhosi (ukuvumela abagrogrisi ukuba baphendule kwakhona).
Phawula amazwi am!
22 Oktobha 2019 kwi-18: 02
I-grapperhaus ayinakulinda ...
22 Oktobha 2019 kwi-18: 42
Ndiyakuva apha "iba Inofizielle Mitarbeiter"? Ikhumbuza kancinci ngelo xesha le-DDR ..
Lo mboniso uvela kwiGrappermaker undikhumbuza ngokuqinileyo ngexesha elithile, kodwa ndizakuba zithandathu kunye neekota ezingalunganga.
22 Oktobha 2019 kwi-19: 40
kutheni izinto zisiba nzima kangaka, anike uHerr Oberst kunye nomphathiswa wakhe weofisi uFaatssicherheit isandla esincedayo ... ngoba xa sisonke somelele 😀
3 Novemba 2019 kwi-17: 03
Asizukisi isalmon kunye nemartin ngoku ... Amapolisa ilizwe hahaha
22 Oktobha 2019 kwi-21: 33
Jonga uphawu ngasekunene kwevidiyo ka-Ole. Kutheni isimboli sinye xa uzazisa njengomntu ofuna inyaniso. Ngaba ke ngoko kuya kufuneka ukuhlwayela amathandabuzo?
22 Oktobha 2019 kwi-22: 37
Ngokukhethekileyo i-marcos abantu abangayibukeli uphawu, luphawu lomyalezo ekuqaleni.
Kodwa kutheni, umzekelo, kutheni uElla uE ster okanye efuna ukwazi ukungasasazeli ifilimu uMartinVrijland kwiwebhusayithi yabo evela kwi-Pegida yokubonisa ubukho, kodwa ukusuka kuloo ngcuka yokunxiba kwegusha u-Olle Damnguard.
Kutheni le nto izibhengezo zikaMartin Vrijland zingazange zithathwe nzulu kwi-OM, ngoba? kuba le bhlogI ayihloliwe, ke abantu.
I-Dammgard encokola kwaye ibetha kwaye ayikaze kodwa ixhase nantoni na ngezinto ezinobunzima. Yonke into iyiflegi yobuxoki ngelixa i-80 isisi-% hoax. Abantu abanjengo-Olle Dammgard, nokuba lolona hlobo lubi kakhulu, abaphulisi phantsi kwephasi (intshukumo yokuchasana) ukuyibeka enjalo, ijoni elinxibe iyunifomu yethu ngasemva dubula.
Yitsho ngokufanayo neqela eliphikisayo le-WantToKnow, EllaStar, Niburu.co kunye nezinye.
Yipawn efana ne-Icke engalawulwa. Ukuba wenza iingxelo ezothusayo malunga ne-CIA nangaphezulu koko ubufanele ukulindele ukungqubana, ungacinga, hayi, hayi u-Olle, u-Olle angaqhubeka nokugcina umlo weqela labantu abasandul 'ukuvuswa, umngcatshi ophosa kakuhle obiza abantu abanjengo-Olle Damm Guard , I-Peck eneentsiba ezininzi, ingamameli
22 Oktobha 2019 kwi-22: 50
Ayizokwamkelwa ngabaninzi ukuba umntu otyhila ngokuthetha "nzulu" kwi-PsyOps kunye "nengxaki, ukuSabela, ukuSombulula" inokuba sisixhobo samandla.
Oko kuya kufuneka ubone ukuba amandla olawulo ayazi ukuba ungabamba inkcaso kuphela kubume bayo ukuba uza kunyula njengenkokeli yeqela eliphikisayo.
I-pawn ephikisayo enjalo ephosiswe kakuhle ifana ne-chameleon ethatha umbala ofanayo kunye nokunambitheka njengabantu abacinga ngokwenene ngokukhululekileyo. Oko kwenza ukuba kube nzima kakhulu kum, kuba umntu ofana noDammegard, kodwa noRobert Jensen bazama ukukopa kanye le nto ndiyizisayo. Indawo yam kuphela evumayo, ihlolwe kuyo yonke indawo kwaye ifakiwe. Kwelinye icala, bafumana ingqalelo epheleleyo.
Isicwangciso sobuchule kakhulu kwaye sinobuchule.
22 Oktobha 2019 kwi-22: 58
Icocwe kakhulu, le psychology yesininzi sele iqhubeka amashumi eminyaka, mhlawumbi isebenza kubantu, kodwa ingekuko wonke umntu, kwaye iya isiba ngakumbi nangakumbi.
22 Oktobha 2019 kwi-23: 39
Ngendlela, i-xandernieuws yalibaleka, iphephandaba le-semi-telegraph okanye inkcaso ephezulu yolawulo njengangaphezulu.
Kubonakala ngathi zonke iiwebhusayithi kufuneka zidibane ngokubambisana iindaba ze-Olle Dammegard. Ayisiyonto imbi kuthi sonke ukuba ayiphelanga kwi-radar yemvula. Mhlawumbi oko kuyakufika, "uhlaselo lweradar", kufuneka ube ulilungu leXandernieuws okanye iTelegraaf okanye ellastar
Ke intsimbi ye-alamu kufuneka icinywe.
Kuba ucinga ukuba u-Ole uzakuba elungile, emva koko ubeselenziwe iyelenqe, kucinge ukuba alilunganga ngoko kubizwa ngokuba kukuvuselela okanye ukoyikisa, kulungile ke kwimithombo yeendaba yonke, kodwa u-Ole uzakuhla.
kwaye okunye kuyaqhubeka kuba bangumthunywa onyulu.
Isifundo ngengqondo kwisininzi sabantu abavukayo
22 Oktobha 2019 kwi-23: 44
Well .. UDe Telegraaf udlala indima ephambili ye-PsyOp kunye newebhusayithi ezichasayo ezilawulayo zidlala indima yomnatha wokhuseleko.
Iminatha yezokhuseleko ethatha umbala weVrijland njenge chameleon.
Ukumiswa kwe-Facebook kunye nezinye iindaba zosasazo zenza ezinye. Indawo ezizezinye ezilawulwayo zityhala kuphela i-pawns yokhuseleko kunye nokuthula kweVrijland kude kuse ekufeni.
Ngaphandle kwalapha e-Xander ... ngoba ngoku ikhonkco kunye neGeenstijl kunye neJensen kufuneka lenzeke ngesiquphe, kuba ndihlala ndibhengeza ezo ndawo ze-2.
23 Oktobha 2019 kwi-05: 33
Ndiyayiqonda kwaye ndiyayiqonda kakuhle le uyichaza ngasentla. Nangona kunjalo, eyona nto indigcina ndixakekile ngumbuzo wokuba kutheni le ndawo isebenzisa uphawu oluqhelekileyo. Inani labantu ababona ngolu phawu luyakhula, kutheni ke eli qhinga. Luthini olwethu uluvo?
23 Oktobha 2019 kwi-07: 14
Ndaye ndaphawula ukuba uMartin Vrijland ukhankanywa kumphefumlo ofanayo noJensen kwaye akukho sitayile. Bacinga ngokwenyani ukuba wonke umntu uyahlonela angabinayo.
Kuyandibetha ukuba phakathi kweempendulo kwi-xandernieuws, umzekelo, kukho iimpendulo eziqonda imeko yokwenyani. Ngoku i-oyile encinci iyanyibilika, kodwa ngokuthe ngcembe iya ikhula ibe nkulu. Bayakwazi ukubamba into abayifunayo kodwa sele kusemva kwexesha.
Inyaniso sele iphumelele.
22 Oktobha 2019 kwi-22: 21
Ngaba uOle angafunda kunye kule webhusayithi? Ngomzuzu we-14: i-21 ithi, "Isekwe kwiNgxaki yakudala, ukuSabela, ukuSombulula. Kwaye ukuphinda oku ngamanye amaxesha ambalwa.
Ungaqala ungcoliseko apha. Ngowuphi umkhombandlela ochazwe nguMartin oza kuzaliseka? 😉
Ngokwam, ndicinga ukuba imeko ye-2 inqweneleka kakhulu kwiskripthi. Iqela elikhulu likhutshiwe ngaphandle komdlalo kwindawo enye. Isalathiso siyanda ukwenziwa kwezinye iindlela zosasazo kwezopolitiko nakumajelo osasazo aphambili. "Lixesha elihle" lokuguqula ezo mithombo yeendaba zisuka kwihempe yakhe.
Kodwa ukuba izinto azihambi njengoko bekucwangcisiwe, imeko ye-1 ngokuqinisekileyo sisicwangciso esihle sokugcina. Ngenxa yoku, olu hlaselo luqikelelweyo akufuneki nokuba lwenzeke. Ukuba akukho nto yenzekayo, u-Ole uphakanyiswa ngokuzenzekelayo kumlo-ukwazi konke.
23 Oktobha 2019 kwi-04: 21
Ayibobulumko ukufota yonke into kwaye ungayikhuphi. Linda kude kube lonke uphando sele lugqityiwe kwaye emva koko ulubeke kwi-intanethi, ukuze mhlawumbi ibali laseburhulumenteni lingasebenzi?
23 Oktobha 2019 kwi-08: 32
Hayi, kuba kucingelwa ukuba impikiswano isetyenziselwa ukuba abgrogrisi (ukuba kukho nantoni na eyenzekayo) babenokufumana idatha enkulu..or: idatha enokuqokelelwa kwiifowuni ngemvume yabucala (emva kokuba kufakwe iiSoftware).
Ngamanye amagama: ii-apps ezininzi zikuvumela ukuba ufikelele kwisitoreji sakho kwaye ujonge loo datha, ngenxa yoko iiseva ezinkulu zedatha zihlala zinemifanekiso kunye neevidiyo.
Ukuba "abashokobezi" banokufikelela kuloo datha inkulu (iiseva zokuqhekeza), baya kuba neefoto kunye nevidiyo yakho.
23 Oktobha 2019 kwi-05: 40
23 Oktobha 2019 kwi-08: 48
U-Ole uhlaselwa kakhulu..aldus Ole. Kungumsebenzi wakhe ukuyenza le nto. Ngamafutshane, abafuna inyani baqhelene nokucinezelwa ngeDammegard.
Ewe baninzi abaya kubaleka emva kwale inethi yokhuseleko, kodwa ininzi kakhulu kum.
Njengenkosi entle, u-Ole Dammegard ngoku uza kuzisebenzisa ezi tekisi.
23 Oktobha 2019 kwi-08: 49
U-Alfred Lambremont Webre ... enye i-pawn ephikisayo elawula inkcaso
23 Oktobha 2019 kwi-08: 58
I-Ole inokuhambahamba nge-motorhome yexabiso eliphantsi kwaye inamava ezona zinto zintle kakhulu.
Indima yakhe: ziqhelanise nengcinezelo (kwaye ngakumbi 'woyike' .. kuba ayinguye wonke umntu oligorha elinje ngo-Ole).
23 Oktobha 2019 kwi-09: 42
Hee Ole! Ngaba mhlawumbi yinjongo yokuba sele ubeka isiseko somthetho omtsha othintela iintlanganiso ezincinci ngaphandle kwemvume?
ellie wabhala wathi:
23 Oktobha 2019 kwi-06: 05
Ukucingela ukuba ichanekile ukuba u-Ole yinkcaso elawulwayo. Ngaba uyazi ukuba ngokwakhe? Ngaba uyinxalenye yokwazi imeko enzulu okanye ngaba yena ulixhoba lokukhohlisa?
23 Oktobha 2019 kwi-08: 43
Akajongi ngqo njengexhoba ngaba ucinga? Kuya kufuneka ujonge ngamehlo kuphela.
23 Oktobha 2019 kwi-10: 54
Ngaba umdlalo uza kuqala ngoku?
23 Oktobha 2019 kwi-17: 13
Abantu abaninzi abacinga ukuba i-Ole Dammegard yindawo ye-CIA:
23 Oktobha 2019 kwi-22: 32
Ewe ibiyimini eyoyikisayo u-Ole!
Ke i-shill iwele ngebhasikithi
Yilahle..ugcine..hayi bump back!
23 Oktobha 2019 kwi-22: 33
I-4 caroline wabhala wathi:
24 Oktobha 2019 kwi-12: 17
Inombolo ye-39 kuphela umdlalo. (Ole)
24 Oktobha 2019 kwi-16: 33
Kwaye Pauw, kunjalo, ulawulo ngakumbi kwaxoxwa kwangoko izolo .. ukulandela imizimba ye39 kwilori ..
24 Oktobha 2019 kwi-16: 35
Imizimba ye-39 ayifani nokuhlaselwa kwe39, kodwa ndayiqaphela kwangoko ..
25 Oktobha 2019 kwi-19: 25
30 Oktobha 2019 kwi-05: 54
30 Oktobha 2019 kwi-12: 31
Mhle! Sithintele ukubulela ku-Ole!
Gcina njalo Ole!
Ndiyabulela u-Ole, i-NATO ihlangane ngokungxamisekileyo ukukhupha iflegi yobuxoki!
Wow WauW WauWW !!! U-Ole yindoda nje yeqhawe!
"Iintlanganiso ezingxamisekileyo eBrussels!" Iesile lam
1 Novemba 2019 kwi-00: 09
Kuya kude kube nini ukuba isimboli kunye / okanye ubuchule be-NLP buye kwiividiyo ezinjalo?
Ndibuze loo nto kuba ndiqaphela ukuba ndaphazanyiswa kukunxiba kuka-Ole okundikhumbuza ulusu lwenyoka. Ndiqaphela nenqaku lika-Ole kule vidiyo. Usondele kakhulu kwaye ujonge ezantsi abaphulaphuli.
1 Novemba 2019 kwi-00: 59
Ezo ziindlela ezingabonwanga zisetyenzisiweyo
30 Oktobha 2019 kwi-06: 09
Ukuhlaziywa ngaphezulu, imizuzu ye-33.39 apha esikrinini, bonwaba abantu.
« I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-3)
Ukubulawa kabini kukaGina noMarinin ePathé cinema Groningen »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.059.531
Mindsupply op UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi